Abavelisi beNkqubo yokuSebenza kombane | KwiChina Inkqubo yoBugcisa boMbane kunye nabaXhasi
Inkqubo ye-300L yokuFudumeza ngombane
Igama leMveliso: Inkqubo yokuFudumeza ngombane Umthamo: 300-600L Umsebenzi: Kwinkqubo yokupheka, kukho iinxalenye ezimbini zokusebenzisa ukufudumeza kombane, enye yimash tun, enye yiketile. Ukufudumeza kombane uMash Tun sisixhobo esisetyenziswa kwinkqubo yokugungxula ukuguqula isitatshi kwiingqolowa ezityumkileyo zibe siswekile yokuvumba. I-mashing tun / kettle yenziwe ngentsimbi engenasici okanye ubhedu. Umlilo othe ngqo uMash Tuns ukhutshiwe ukuze kugcinwe ubushushu obuqhubekayo. Kubandakanya umlilo othe ngqo ...
500L Inkqubo yoBushushu boMbane
Igama leMveliso: Inkqubo yokuShushubeza kombane amandla: Ukufudumeza kombane uMash Tun sisixhobo esisetyenziswa kwinkqubo yokugungxula ukuguqula isitatshi kwiingqolowa ezityumkileyo zibe siswekile yokuvumba. I-mashing tun / kettle yenziwe ngentsimbi engenasici okanye ubhedu. Umlilo othe ngqo uMash Tuns ukhutshiwe ukuze kugcinwe ubushushu obuqhubekayo. Kubandakanya umlilo othe ngqo ...
Inkqubo ye-1000L yokuFudumeza ngombane
Kwinkqubo yokupheka iyonke, zimbini iinxalenye zokusebenzisa ukufudumeza kombane, enye yimash tun, enye iketile.
Ukufudumeza kombane uMash Tun sisixhobo esisetyenziswa kwinkqubo yokugungxula ukuguqula isitatshi kwiingqolowa ezityumkileyo zibe siswekile yokuvumba. I-mashing tun / kettle yenziwe ngentsimbi engenasici okanye ubhedu.
Umlilo othe ngqo uMash Tuns ukhutshiwe ukuze kugcinwe ubushushu obuqhubekayo. Kubandakanya igumbi lokutsha lomlilo ngqo, itshimini kunye nesixhobo sokhuseleko.